गोलीगठ्ठासहित अमेरिकी सेनाको टोली काठमाडौंमा ओर्लियो, बसोबासको स्थान राखियो गोप्य ! | Prahar News
गोलीगठ्ठासहित अमेरिकी सेनाको टोली काठमाडौंमा ओर्लियो, बसोबासको स्थान राखियो गोप्य !
काठमाडौं । मंगलबार अमेरिकी सेनाको एक टुकडी सुटुक्क त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको खबर छ । अमेरिकी सेनाको टोली नेपाल आएको १ दिनपछि मात्रै यो खबर बाहिरिएको हो । अमेरिकी सेना अन्य केही प्रयोजनका निम्ति नभएर नेपाली सेनासँग संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने ब्यालेन्स नेल २२–५५२० मा सहभागी हुन नेपाल आएको हो । यो टोलीमा अमेरिकी सेनाका विभिन्न दर्ताका २२ सैनिक सहभागी छन् । ब्यालेन्स नेल नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच हुने संयुक्त सैन्य तालिम हो ।
केही वर्ष अघिदेखि जोडिएको यो सम्बन्ध जारी छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले हरेक वर्ष सञ्चालन हुने यो तालिमका लागि अमेरिकी सेनाको एक टोली चैत १६ गते नेपाल आएको जानकारी दिए । नियमित प्रक्रिया भए पनि नेपाली सेनाले यसलाई योपालि सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीचको यो तालिम चैत १६ गतेबाट नै शुभारम्भ भइसकेको छ । तथापि, तालिम सञ्चालन गरिएको स्थानबारे भने गोप्य राखिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले यसबारे आफू ‘अपडेट’ हुन बाँकी रहेको बताए । तालिम झण्डै एक महिना अर्थात् आगामी वैशाख १६ सम्म सञ्चालन हुनेछ । तालिममा सहभागी हुन आएको अमेरिकी सेनाको टोलीले हतियार, एम्युनिसन, मिलापका साधन तथा आवश्यक अन्य सामग्री साथमै लिएर आएका छन् ।
नेपाली सेनाको नीति तथा योजना निर्देशनालय व्यवस्था, नीति तथा योजना विभागले तालिमबारे जानकारी गराउँदै अमेरिकी सेना र तिनले ल्याउने सामग्रीलाई अनुमति दिन रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । रक्षाले सचिवस्तरीय निर्णयबाट ती सामग्री ल्याउन अनुमति दिएको पाइएको छ । रक्षाले अनुमति प्रदान गर्दै गृह, परराष्ट्र, अर्थ, संस्कृति तथा पर्यटन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।
स्रोतका अनुसार यसअघि गतविगत बर्षहरुमा समेत अमेरिकी सेना नेपाल आउने गरेको तर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएपछि अमेरिकी सेना आउदा समेत यसलाई शंकाको नजरले हेरिने गरेको छ ।